तिथि मेरो पत्रु » एक अद्भुत पहिलो तिथि छ कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 21 2020 |5मिनेट पढ्न
एक पहिलो तारीख दुवै पक्षहरु लागि झमेला समय हुन सक्छ. न त आशा गर्न के थाह, तपाईं अनलाइन वा फोनमा र शायद व्यक्ति बोलेका पनि यदि तपाईं एकदम राम्रो तिनीहरूलाई थाह महसुस, अधिकांश मानिसहरू एक पहिलो तारीख अघि भयातुर महसुस गर्छन. त्यसैले यहाँ एक महान पहिलो तारीख छ केही सुझाव हो.
छोटो पहिलो मिति राख्नुहोस् - पहिलो मिति एक सानो झमेला हुन सक्छ किनभने यो छोटो र मीठो बनाउन आदर्श छ. यो तरिका एक महान समय सँगै छ र एक उच्च मा समाप्त गर्न सक्छन्. तपाईं अनलाइन कुराहरु हुँदा जतिसुकै धेरै जोडिएको हुन सक्छ, तपाईं व्यक्ति मा पूरा गर्दा यो पूर्णतया अलग हुन सक्छन्, र तपाईं वास्तविक जीवनमा तिनीहरूलाई समय बिताउन सम्म तपाईं मा प्राप्त गर्न जाँदैछन् कसरी थाह कहिल्यै. त्यसैले मनमा यो वहन छोटो पहिलो मिति राख्न.
तपाईं तिनीहरूलाई सहज महसुस गर्दैनन् भने यो बाटो गरेर त तपाईं प्रारम्भिक छोड्न सक्नुहुन्छ. तर यदि तपाईं त्यो साँच्चै तिनीहरूलाई मन, यो छोटो मिति राख्न पनि महत्त्वपूर्ण छ. तिनीहरूले डेटिङ गर्दै गर्दा बनाउन एक ठूलो गल्ती पनि चाँडै सँगै धेरै समय खर्च गर्न छ. यो स्वाभाविक हो तापनि तपाईं एक अर्को मन गर्दा सँगै समय खर्च गर्ने चाहना, यो समय अधिक बिस्तारै विकसित यदि जडान बढी स्वाभाविक विकास हुनेछ. तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् यो बाटो बिस्तारै एकअर्कालाई राम्ररी. साथै तपाईं सुरुमा पनि उपलब्ध सही छैन भने प्रत्येक अन्य अधिक मूल्य हुनेछ. स्वस्थ मान्छे खर्च समय डेटिङ साथै आफ्नै अलग जीवन राख्न.
मन मा यो असर एक पहिलो तारीख लागि खाने आरक्षण गर्नबाट. यो भयानक हुन बाहिर जान्छ भने (र यो गर्न सक्छन्) तपाईं कम्तीमा एक घण्टा माध्यम बस्न हुनेछ, सामान्यतया अब, तिनीहरूलाई, वा प्रारम्भिक छोड्ने धेरै अशिष्ट हुन.
मा र मजा केहि हात छ? - पल्ट मा एक पेय एक पहिलो तारीख को लागि एक साधारण विकल्प छ तापनि यो सबै आविष्कारशील छैन. साथै यो तपाईं एक औपचारिक सेटिंग मा भर एक अर्को देखि बसिरहेका छन् जब बरफ तोड्न एक सानो गाह्रो हुन सक्छ. यो छिटो र सजिलो छ किनभने यस्तै दिशामा एक कफी कब्जाने एक पहिलो तारीख लागि एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ, तपाईं साँच्चै एक छाप पार्न चाहनुहुन्छ भने तथापि किन सट्टा असामान्य कुरा र हात लागि जाने छैन. सँगै एक गतिविधि गरिरहेका छन् जहाँ केहि छान्नुहोस्, यस रूपमा राम्रो मा बढी हात बरफ तोड्न मदत गर्न सक्छ. राम्रो उदाहरण सँगै खाना पकाउँदै छन्, एक सुन्दर सेटिंग मा एक पैदल लागि जाने, तपाईं जहाँ बर्तन वा केहि एक टीम रूपमा काम गर्न. सँगै काम गर्दै गरिनेछ रूपमा यो तपाईं को दुई बन्द दबाब हुनेछ. यो आफ्नो व्यक्तित्व बढी स्वाभाविक आउनेछ गर्न अनुमति दिन्छ, बरु मिति तालिका भर एक 'साक्षात्कार' मा बदल भन्दा, जो तपाईं एक पल्ट भेट्ने गर्दा अक्सर हुन सक्छ.
सुरक्षित हुन - यो एक dater गरेको मन्त्र को भाग हुनु पर्छ, विशेष गरी एकल महिला लागि. यो तपाईं सधैं मनमा सुरक्षा राख्न र सार्वजनिक ठाउँमा तपाईं कसैलाई भेट्न पहिलो पटक पूरा गर्न को लागि विकल्प पर्छ भनेर नभनी. आफ्नो घरमा खाने को लागि जान सहमत छैन. जतिसुकै राम्रो तपाईं महसुस तपाईं अनलाइन कुरा कसैलाई थाहा, तपाईं साँच्चै तपाईं तिनीहरूलाई समय बिताएका छन् नगरेसम्म कसरी भरोसायोग्य कसैले बताउन कहिल्यै गर्न सक्छन्. साथै, आफ्नो अंतर्ज्ञान मा साँच्चै धुन (राम्रो वृत्ति). यसले तपाईंलाई सुरक्षा गर्न र केहि या कुनै सही महसुस गर्दैन जब सामान्यतया आफ्नो अंतर्ज्ञान तिमीहरूलाई भन्नेछु छ. यो कुरा सुन्न र सधैं पहिलो सुरक्षा राखे.
के तपाईं आफ्नो मिति जान अघि मन को सही फ्रेम मा सुनिश्चित - धेरै मानिसहरू काम देखि सीधा आफ्नो मिति जाने, यस खराबी छ, जबकि यो तपाईं आफ्नो तिथि को लागि मन को सही फ्रेम मा देखाउन भन्ने निश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ. आफ्नो टाउको आफ्नो 'गर्न' सूची मा अझै पनि छ भने तपाईं मिति मा धेरै मजा हुनेछैन! तपाईं बारी त्यसै गरी यदि जोड, एक असल पहिलो छाप छैन दुःखी र तपाईं कराह. तपाईं आफ्नो मिति मा टाउको पहिले आफैलाई आराम र तयारी गर्न केही मिनेट लिनुहोस्. केही गहिरो साँस लो र उपयुक्त भने एक छूट व्यायाम गर्न. तपाईं जान मिति चाहनुहुन्छ कसरी कल्पना - आफ्नो मन तयार. तपाईं काम देखि सीधा जाने भने पनि तपाईं बस मा यो बेला गर्न सक्ने.
केही महिला घन्टा शारीरिक तयार खर्च, तर मानसिक तयारी कुनै पनि समय खर्च छैन. यो तपाईं आफ्नो उपस्थिति संग विश्वस्त महसुस भन्ने निश्चित गर्न राम्रो छ, जबकि, वास्तवमा दबाब थप्न सक्नुहुन्छ मा घण्टौं. बरु आफूलाई स्मार्ट हेर्न बनाउन र राम्रो महसुस गर्न बस लामो पर्याप्त खर्च, त्यसपछि पनि आफ्नो मन तयार केहि मिनेट खर्च. आदर्श तपाईं महसूस आफ्नो तिथिहरु मा जानेछन् उत्साहित र अपेक्षाकृत शान्त. यो तपाईं तयार छन्, जबकि केही उत्थान संगीत खेल्न राम्रो हुन र पनि कोठा वरिपरि एक नृत्य हुन सक्छ. तपाईं मन सिद्ध राज्य वा तपाईँलाई भयातुर हो भने छैनन् भने आफ्नो मिति रद्द छैन भने गरिसकेपछि. अक्सर एक पटक तपाईं घर बाहिर प्राप्त र मिति मा तपाईं आराम र मजा छ.
आफैलाई हुनुहोस् - मान्छे पहिलो तिथिहरु मा कहिलेकाहीं तिनीहरूले छैनन्. तिनीहरूले अन्य व्यक्ति प्रभावित गर्ने प्रयास गर्न आफ्नो व्यक्तित्व परिवर्तन. सायद आफ्नो स्नायु तिनीहरूलाई को राम्रो प्राप्त गर्न र तिनीहरूले विचित्र व्यवहार अन्त, पनि कडा परिश्रम गरिरहेका, माथि clamming वा समेत स्नायु ढाकछोप गर्न एक सामने मा डाल. यस पुरा तरिकाले अनावश्यक छ र एक जडान बनाउन र आफ्नो मिति मजा को आफ्नो अवसरहरुमा हानि गर्न सक्छ. म पहिलो पटक त मेरो तपाईं एक सानो गुप्त सुनाउँछु लागि यो बौलाहाझैँ बरबराइरहेको बैठक कुनै हुन सक्छ थाह. सबैले एक पहिलो तारीख मा भयातुर महसुस! त्यसैले आफ्नो मिति संभावना तपाईं जस्तै आशंकित महसुस हुनेछ. यो त हुक बन्द आफैलाई गरौं प्राकृतिक छ. बरु आफ्नो स्नायु बारेमा चिन्ता को तपाईं को सामने यो व्यक्ति केही नयाँ कुरा सिक्ने मा ध्यान र उनलाई सहज महसुस बनाउने बारेमा सोच्न. एकदम स्वाभाविक आराम तपाईं आफैलाई पाउनुहुनेछ यो तरिका. अवश्य यो माथि उल्लेख गरिएका रूपमा पनि तपाईं आराम गर्न मदत गर्न सक्छ गतिविधि मा एक हात गर्न रोजेको भने. तपाईं शिथिल महसुस हुँदा आफ्नो साँचो व्यक्तित्व माध्यम ले चमक हुनेछ. बस आफैलाई हुन. तपाईं छन् ठ्याक्कै कसरी सिद्ध हो.
मजा - पश्चिमी संस्कृति मा हामी सबै धेरै गम्भीरतासाथ डेटिङ लिन लाग्न. यस व्यक्ति एक उपयुक्त जीवन साथी यो चरण मा छ कि बाहिर पा बारेमा बिर्सने. तिनीहरूले उपयुक्त प्रेमी / प्रेमिका सामाग्री भने एक पहिलो तारीख बाहिर पत्ता लागि होइन. त्यो पछि आउँछ. संभावना तिनीहरूले हुन् – सबै भन्दा पहिलो तिथिहरु सम्बन्धमा नेतृत्व छैन र तपाईं यो थाहा यदि यो तपाईं आफ्नो अपेक्षालाई व्यवस्थापन गर्न मदत गर्न सक्छ. पहिलो तिथिहरु तपाईं बाहिर त्यहाँ बैठक र नयाँ मान्छे अन्तरक्रिया प्राप्त गर्न केवल छन्, र तिनीहरूले आफैलाई आनन्द र मजा लागि हो. यस सन्दर्भमा बाटो 'मजा' गरेर साँच्चै रक्सीले मातेको रही वा सेक्स भएको होइन, जो दुवै एक पहिलो तारीख मा टाढा बस्नुपर्छ (तपाईं दोस्रो मिति चाहनुहुन्छ भने छ). म संग काम एकल ग्राहकहरु लागि सधैं त्यहाँ बाहिर रही र वास्तविक संसारमा डेटिङ सिफारिस. म अत्यधिक तपाईं अझ बढी सिक्न चिकित्सा रूपमा डेटिङ मा मेरो लेख पढ्न सिफारिस.
मजा डेटिङ छ!
तपाईं एक पत्रु प्रतिबद्धता लागि तयार हुनुहुन्छ?